प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरे लिखित जवाफ, यस्ता छन् १८ बुँदा
‘सरकारलाई शेयर बजारको खेलाडी बन्न नउचालौं’
विश्व ब्यांकले नेपाललाई रू.१७ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने
सात देशमा हवाई उडान खोल्ने सीसीएमसीको निर्णय
बाढीपहिरोबाट १३ जिल्ला प्रभावित, ६ को मृत्यु, २७ जना बेपत्ता
काठमाडौंबाट कसरी हरायो रातो चिमाल?
‘बृहत् योजना नबनाए खानी सञ्चालनले चरम दोहन निम्त्याउनेछ’
यस्तो छ मेलम्ची विनाशको भित्री कारण
‘संरक्षणमा लागेकै कारण दाइ मारिनुभो, तर हाम्रो दु:ख कसैले देखेन'
सम्झनामा कुसुम श्रेष्‍ठ- कानूनी राज्य र स्वतन्त्रताका पक्षपाती
व्यक्तित्व राधेश्याम अधिकारी
तत्कालीन पञ्‍चायती सरकारले दाहालजी सम्पादक रहेको राष्ट्रपुकार साप्ताहिक बन्द गर्ने आदेश दिएछ। त्यसविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइ रत्‍नबहादुर बिष्‍टको बेञ्‍चमा तोकिएको थियो। मुद्दा शुरु गर्नुअघि अनौपचारिक रूपमा न्यायाधीश बिष्‍टले कुसुमजीलाई लक्ष्य गरेर बेञ्चबाटै सोध्नुभएछ- ‘जेन्टलमेन आजको उल्लेखनीय खबर के छ ?’ कुसुमजीले झट्ट जवाफ दिनुभएछ- ‘अफ्रिकाको कुनै देशको प्रधानन्यायाधीशलाई बन्दी बनाइएको छ।’
रोमान्टिक क्रान्तिकारीको अवसान
घटनाभन्दा माथि विचारको तहमा बहस गर्न सक्ने नेपाली कांग्रेसभित्रका उम्दा बौद्धिक थिए, चक्र बास्तोला ।
मिस नेपालको मिसन
सन् २०१८ की मिस नेपाल शृंखला खतिवडा मकवानपुरको विकट गाउँ भार्तामा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन जुटिरहेकी छन् ।
‘शव दान दिनू, काजकिरिया नगर्नू’
‘जदौ श्रोता, खुल्यो साहित्य संसारको दैलो...’ दाहाल यज्ञनिधिले २०३४ सालदेखि रेडियो मार्फत ‘जदौ’ शब्दको उच्चारण गरेका हुन् ।
भरतशमशेर राणाः ‘हन्ड्रेड पर्सेन्ट’ विद्रोही
शासक परिवारमा जन्मिएका भरतशमशेर कुलीनतन्त्र र शासक विरुद्ध सधैं जाइलागे । धर्मनिन्दक उनी जीवनका अन्तिम दिनहरूमा सन्तुष्ट देखिन्थे ।
स्वर्गीय मनुजबाबु मिश्रलाई नेपाली समाजले मूर्धन्य कलाकार, साहित्यकार र असल गुरुको रुपमा सम्झिरहनेछ ।
दहेज विरुद्धका दूत
दाइजो कम ल्याएको निहुँमा एक महिलाको हत्या भएको खबर पढेसँगै मोहम्मद मकसुद राँकीले शुरू गरेको ‘दहेज विरोधी अभियान’ ले रौतहटको दूरदेहातसम्मै आफ्नो प्रभाव देखाउन थालेको छ।
केदारको पनिर पौरख
सानो लगानीमा दैनिक ३० किलोसम्म पनिर उत्पादन गरी नुवाकोटबाट काठमाडौं पुर्‍याउने केदारको पौरख उदाहरणीय छ ।
नरेशमान शाक्यः जसले रोके कृष्णभीरको पहिरो
पहिरो नियन्त्रणका लागि गरिएका बाह्य प्रस्ताव असफल भएपछि सडक विभाग आफैँ काम गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । पहिरोमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए, विभागकै इन्जिनियर नरेशमान शाक्यले ।
धेरैका लागि, कतिपय अर्थमा सरकारका लागि समेत बेकारका सामग्रीलाई निजी मिहिनेत र सम्पत्ति खर्चेर संरक्षण गर्ने राजेन्द्रगोपाल सिंहको प्रयास प्रेरणादायी छ ।
पूर्वीय दर्शनका मनीषी
२३ असारमा काठमाडौंमा निधन भएका डा. स्वामी रामानन्द गिरीको २४ असार गुरुपूर्णिमाका दिन चितवनस्थित नारायणी नदीमा जलसमाधि गरियो ।
धनगढी परिणामः समाज परिवर्तको संकेत
उपमहानगरपालिकामध्ये एक धनगढीमा मेयर निर्वाचित दलित समुदायका नृप वड यहाँका मददाताले समाज परिवर्तनको गतिलो संकेत दिएको बताउँछन् ।
निष्ठाका पर्याय रामहरि जोशी
प्रायः सुतीको कमिज–सुरुवाल, कालो चश्मा र खैरो ज्वारीकोटमा सजिएर हिंड्थे, रामहरि जोशी । महात्मा गान्धीका अनुयायी उनी ‘अहिंसा र शान्ति’ का पक्षपाती थिए ।
कान्छी उपमेयरको प्राथमिकता
उमेरमा सबैभन्दा कान्छी नगर उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी (२३) सबै समुदायको सेवा गर्न चाहन्छिन् ।
सन्तुलनका पर्याय: विपिन अधिकारी
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानूनसँगै समसामयिक विषयमा वस्तुगत र मेरिटको आधारमा विचार प्रवाह गरिरहेका छन्।
स्वतन्त्रताका सारथि: राधेश्याम अधिकारी
सांसद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी चार दशकदेखि लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन्।
समाजका पूँजी: चैतन्य मिश्र
'पपुलिज्म' र भीडबाट टाढै रहेर बदलिंदो नेपाली समाजको वास्तविक चरित्र बुझाउन प्रा. चैतन्य मिश्रजत्तिको योगदान शायदै अरुले गरेका छन्।
'नेपाली समाज पूँजीवादी हो' तीनदशकअघि नै मिश्रले भनेका थिए। तर, पार्टीहरू जडता त्याग्न तयार देखिएनन्। माओवादीले यही तर्कको जगमा दशकलामो हिंसात्मक विद्रोह गर्‍यो। तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमै देश पूँजीवादमा प्रवेश गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्।
बेलाको बोली: प्रत्यूष वन्त
बौद्धिक कर्ममाथि नै शासनव्यवस्था खनिन थालेपछि चूपचाप प्राज्ञिक कर्म गरिरहेका प्रत्यूष वन्तलाई समेत सार्वजनिक बहसमा नओर्लिकन सुखै भएन।
सुशासनका योद्धा: जीवन क्षेत्री
माओवादी द्वन्द्वको पीडा र दोस्रो जनआन्दोलनको रापबाट आएका डा. जीवन क्षेत्री चिकित्सा शिक्षा सुधार र सुशासनका लागि लडिरहेका छन्।
विधिका वाहक: नीलाम्बर आचार्य
लोकतन्त्र, न्याय र विधिको शासनका लागि नीलाम्बर आचार्य (७३) को प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिता वास्तवमै ईर्ष्यालाग्दो छ । 'बेथिति देख्दा उदास हुन्छु। तर उदास बस्नु भएन। मनलाई रचनात्मक सोच र केही काममा लगाउने यत्न गर्छु। उदासी हट्दै जान्छ। मन सकारात्मक बन्दै जान्छ।'
विकास विचारक: सूर्यराज आचार्य
झण्डै दुईदशक जापान बसेर दुई वर्षअघि मात्र स्वदेश फर्र्किएका योजनाविद् प्रा.डा. सूर्यराज आचार्य (५४) का विकास बहस नसुन्न सकिन्छ तर बेवास्ता गर्न सकिन्न। भौतिक सुखभन्दा पेशागत र सामाजिक सन्तुष्टि ठूलो कुरा भएको बताउने आचार्य 'थिंक ट्यांक' समूह बनाएर सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई सघाउने योजना बुनिरहेका छन्।
शरीरमाथि महिलाका अधिकार र बदलिंदो जीवनशैलीले निम्त्याएका स्वास्थ्य समस्याबारे वर्षौंदेखि सुनिरहेको आवाज अरू कसैको नभई अरुणा उप्रेतीकै हो।
सद्भाव दूत: शान्ता चौधरी
कम्लहरी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएकी शान्ता चौधरी जातिय द्वेष होइन समभावले तराई/मधेशको हित हुनेमा दृढ छिन्।
बेथितिका शल्यचिकित्सक: रामेश कोइराला
पेशाले शल्यचिकित्सक रामेश कोइराला (४८) सार्वजनिक बहसको माध्यमबाट राजनीति–संक्रमित विकृति निको पार्न चाहन्छन्।
राज्य प्रवर्द्धित मौन संस्कृतिको जोखिम बढिरहेका बेला, अधिकांश बौद्धिक व्यक्तिहरूको स्वर नसुनिएका बेला, मुटुका शल्यचिकित्सक कोइराला नयाँ स्वर बनेर देखिए। सामाजिक सञ्जालमा छोटा र तिखा अनि पत्रपत्रिकामा लामा र गहन विचारले उनको बहुआयामिक व्यक्तित्वको परख गराइरहेको छ।
कतान्त्रिक मूल्यका खातिर आवाज उँचो गरेकै कारण पटकपटक दण्डित हुनुपरे पनि शम्भु थापाको स्वर दबेको छैन। संविधानको धारा १२७ को गलत व्याख्या गर्दै १९ वैशाख २०६१ मा 'कु' गरेका राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सार्वजनिक ठाउँमै भाषण गरे– “संविधानको धाराले नचिन्ने राजा म पनि चिन्दिनँ।”
सार्वजनिक चोक, कफी हाउस, पुस्तकालय, नाटकघर र साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा दशकौंदेखि उपलब्ध अभि सुवेदीले नयाँ पुस्ताका लागि चेतनाको ऊर्जा भरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुरे थुम्कोमा अभि सुवेदीले ३६ वर्ष ६ महीना २४ दिन चक र डस्टरले क्यानभास कोरेर अवकाश लिए। तर नोकरीबाट अवकाश लिएका उनले कर्म अर्थात् शिक्षणबाट भने अवकाश लिएनन्। करारमै सही, कक्षा लिइरहेका छन्।
बहुआयामिक बौद्धिक: पीताम्बर शर्मा
योजनाविद् प्रा.डा. पीताम्बर शर्माले अधिकार, विकास, शहरीकरण, पर्वतीय पर्यटन, बसाइँसराइ र वातावरणदेखि राज्यपुनर्संरचनासम्मका विषयमा महत्वपूर्ण विचार दिइरहेका छन्।
अमेरिकाको कर्नेल युनिभर्सिटीबाट 'अर्बनाइजेसन एण्ड रिजनल प्लानिङ' मा विद्यावारिधि शर्माको दक्खल शहरीकरण र बसाइँसराइमा मात्र सीमित छैन। अनरिभलिङ द मोज्याकः स्पाटियल एस्पेक्टस् अफ इथ्निसिटी इन नेपाल (२००८), मार्केट टाउन्स इन द हिन्दू कुश–हिमालयज (२००१), टुरिज्म एज डेभलपमेन्ट (२०००), अर्बनाइजेसन इन नेपाल (१९८९) जस्ता पुस्तक उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व दर्शाउन पर्याप्त छन्। प्रोफेसर शर्माले विकास, पर्वतीय पर्यटन, आर्थिक तथा वातावरणीय योजनालगायतका क्षेत्रमा सम्झ्नलायक काम गरेका छन्।
सीमाञ्चलका सेतु: चन्द्रकिशोर
चन्द्रकिशोर कहाँ उभिएर के लेखिरहेका छन्, त्यो महत्वपूर्ण छ। कहिले 'तराई चिनौं' त कहिले 'डेटलाइन तराई' मार्फत समथरका नेपालीको दुःखसुख कसैले बुझाइरहेको छ भने उनी चन्द्रकिशोर नै हुन्। वीरगञ्जमा बसेर निरन्तर काठमाडौंलाई हस्तक्षेप गरिरहेका कोही लेखक छन् भने ती चन्द्रकिशोर नै हुन्। आफूलाई सीमाञ्चलवासी भन्ने उनी सीमानाबाट उत्तर फर्केर लेखिरहेका छन्।
संकटका स्वर: केदारभक्त माथेमा
प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिएका धर्मभक्त माथेमाका भतिज केदारभक्त गणतन्त्रमा थिति बसाउन बौद्धिक नेतृत्व गरिरहेका छन् ।